ABASEDISEMBA: NDIZA KUBA KUKUPHONONONGWA KWEALBHAMU YENTOMBAZANA YAKHO - IINDABA
Ndizakuba yintombazana yakho
Yakhiwe yingubo entsha ye-synths kunye namandla ahlaziyiweyo, i-Decemberists yakutshanje i-albhamu enomdla ophakathi kwendlela, ehlekisa ngeendlela ezininzi ngaphandle kokuzibophelela nakweyiphi na kuzo.
Ukuhamba emva kwexesha Ndizakuba yintombazana yakho , kukho iRusalka, iRusalka / iRushes yaseKhaya, isiteyithi esibalisayo esekwe kumzekeliso omdala weSlavic malunga ne-mermaid ekhohlisa amadoda ukuze abakhohlise ukuba batshone. Ngaphezulu kwemizuzu esibhozo igcwele uxinzelelo olukhulu kunye neprozi yeflorid, uColin Meloy ucacisa amaxhoba amabini, elinye lidini lokuzithandela elivuswe likamva lakhe, elinye naïve kwaye alithandabuzeki. Ibunzi lakho licinezelwe ziintyatyambo, limfiliba kwinyanga ene liminal, uyacula, emisela ukufa ngakunye ngomonde wombalisi oyincutshe, evuyela ukurhanela kude kube ekugqibeleni umkhondo ugqitywe ulunge kakhulu, isizwana se polyphonic.
AmaDisemba ayehlala ezi ntlobo zeepic, iindiza ezibhalwe ngocoselelo zentsomi. Kwiminyaka elishumi eyadlulayo ibhendi ibinokuzinikela icwecwe elipheleleyo kule mermaid yokubulala-ungaphantse uve isixhobo seBaltic kwaye ufote umfanekiso wobugcisa beqweqwe-kodwa ke le ngoma yindawo yokumisa umngxunya kwi-albhamu engenakukuthintela ukugqithisa kweminyaka . Ukusukela ukubetha kwincopho yenyani ngo-2009 Iingozi Zothando , ngoDisemba baye bahlengahlengisa umculo wabo ukuya kwinto ethe ngqo ethe gca nangaphantsi. Endaweni yokuqhubekeka njengeyona bhanti yendlu yendibano ye-LARP egqwesileyo, bamkele indlela yokuhambahamba, bebaleka ngayo nayiphi na imyuziyam ethi iziveze okwangoku. Kukurhweba okumnandi: Kwakufuneka baguquke ukuze bagcine izinto zintsha, nangona nantoni na abayenzayo ngokulandelayo ayinakulindeleka ukuba ibe yinto engalibalekiyo njengaleyo yeza ngaphambili.
Ngaphezulu kwee-albhamu ezimbini ezandulelayo, Ndizakuba yintombazana yakho yingxowa yokubamba, uhlekisa ngeendlela ezininzi ngaphandle kokuzibophelela kuyo nayiphi na kuzo. Njengengxenye yedrive drive yabo yokunyikimisa izinto, ibhendi yafaka umvelisi wexesha elide u-Tucker Martine kaJohn Congleton, i-indie ringer kunye ne-chameleon otya kakhulu ngoonyana. Ayisiyonto ifanelekileyo yendalo-ezona projekthi zakhe zibalaseleyo, njengokubambisana kwakhe no-Xiu Xiu, iSt. Vincent, kunye ne-Swans okanye iialbham zakhe ezingathandekiyo ngePhepha lokuSukela, zinomda kubo ngaphezu kwayo nayiphi na ikhathalogu kaDisemba- kodwa Ukumdibanisa nomculo ongathandani naye njengoMeloy kuveza ezinye izinto ezinomdla. Ukuba nayiphi na indibaniselwano inokubonisa ubuhle bentsingiselo nenoveli ethile, kufanele ukuba ibe yile.
Ingxelo iveza umbono wayo ongqindilili ngaphambili, kunye nokuqhutywa kweetrekhi zokuvula ezihlekisa ngokubuyiselwa kwe-synth-rock kwiqela. U-Meloy ukhankanye i-Order eNtsha kunye neMowudi yeDepeche njengempembelelo, kodwa izinto ezinkulu, ezijikelezayo kuLunye kuBomi bam zisondele emoyeni eBerlin Thatha umoya wam uwuse kude okanye Intle ngePinki -i-Orchestral Maneuvers eMnyameni, amanqaku ekubhekiswa kuwo angaphantse amenyezeleke ephepheni kodwa anomdla ngakumbi ekusebenzeni. Okwethutyana, kukho phantse ugculelo lokuva ezo gaudy, izinto zokwenziwa ezopheleyo zisopha ngeqela elalikade linobubhanxa, isandi se-acoustic. Ngaphakathi kweengoma ezimbalwa, nangona kunjalo, ukothuka kwento entsha kuyaphela, kwaye ibhendi iqala ukusilela kwiimpembelelo eziqhelekileyo. Iingoma ezintathu zilandelelana zikhupha i-whiffs eyomeleleyo ye-REM : Ikhethiwe (inemoya, Umqhubi 8 uhlobo lwe-vibe), i-Starwatcher (kakhulu Uxwebhu ), kunye nokuThutha ecaleni (ialbhamu Zenzekelayo kuBantu Okomzuzwana).
Ndizakuba yintombazana yakho lixesha lezopolitiko ngendlela yalo, nangona ngaphaya kombulelo okhethekileyo kuMcebisi oKhethekileyo uRobert Mueller ebhalele amanqaku e-liner, lijongana nezopolitiko ngengqondo ebanzi. Endaweni yokuba uMeloy athabathe uxinzelelo ngokubanzi lokuba umhlaba uluhlobo nje ngoku. Kanye ebomini bam… ingaba into ihamba kakuhle? uyacula, ebiza eyokuqala ye-albhamu ezininzi zikaCharlie Brown-isms. Uthatha kwa-chipper nihilism efanayo kwi-silly egqithileyo kwirekhodi eyona nto ibambekayo: isibini se-fuck yonke into yeengoma ezenziwa ngokungaqondakaliyo njengeengoma zabantwana. Into emnandi egulayo Yonke into eyoyikisayo sisiseko esirhabaxa-impendulo kaMeloy, mhlawumbi, kuloo nto yindoda umxholo ukusuka Umboniso bhanyabhanya weLego -Ngethuba Sonke Sifa sincinci simisela uJock Jams ukuba abethe uKidz Bop.
Ithathiwe iyodwa, ezo ngoma azikho kakhulu kolula. Uninzi lwabalandeli bakaDisemba baneminyaka yobudala baba ngabazali, kwaye akukho nzima ngokwenene ukucinga ngekamva apho banokuthi babe ziGiants, enye intandokazi yeLinda ulinde ... Ungandixeleli! setha, baqala ukurekhoda ii-albhamu zabantwana. Ukujonga ukusuka Ndizakuba yintombazana yakho , mhlawumbi baya kuba kuhle kuyo. Kodwa inyani yokuba ngokusisiseko besandule isibini sabantwana beculo kwi-albhamu efanayo njengesixhobo malunga nesini sokubulala umntu obonisa ngesondo ebonisa kuphela indlela edideke ngayo kunye nokungabi nasikhokelo kweli qela ngoku. Apho babekade begxile kwii-albhamu ezicwangcisiweyo, ngoku kubonakala ngathi bayayiphaphazela. Benza umculo onomdla, kodwa ii-albhamu zabo azikaze zivakale ngokungafaniyo.
Nicki minaj umzalwana ubanjiwe
iingoma ezinkulu ze-bass rap
Iinduli ze-lauren ms
sylvan esso yintoni ngoku iingoma